Okuhambayo Ne Ukukhubazeka EYurophu Made Easy | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Okuhambayo Ne Ukukhubazeka EYurophu Made Easy
Kungani senza ngihambe ngesitimela? Izincwajana zemininingwane travel eziphumulele, kwenta na inikeza isici nomphakathi ukuthi ezinye izindlela zokuhamba nje angeke umadanise. Nokho, ukuhamba ukukhubazeka kungaba nzima kwabanye. Lokhu akusho ukuthi awukwazi ukujabulela ubumnandi, Nokho. Lesi sihloko linikeza izindawo ezithile eziyisisekelo ezidinga ukuba cabanga lapho uhlela yakho uhambo ngesitimela ngakho ukuhamba ukukhubazeka eYurophu akulethi ukucindezeleka.
Nakuba zikhona ngokuqinisekile ezinye izinselele ukufinyeleleka, yokuthi eziyisisekelo ukuthi olunye ucwaningo ongayenza, i-kufinyeleleke kakhudlwana futhi kumnandi uhambo lwakho kuyoba! Ngokwesibonelo; Bewazi yini ukuthi amanxiwa naseHerculaneum sika kukhona lacishe nsé yasePompeii, kodwa kukhona sabakhubazekile-friendly? Futhi lokho cruise abagibeli abakhubazekile abanayo ukuthatha “indlela imbongolo” up amawa lapho sivakashele isiqhingi yesiGreki Santorini? iholide lakho ayidingi ukuba umzabalazo - ukwenza umsebenzi wakho wesikole futhi uhambo lwakho kungenziwa egcwele kufinyeleleke ngokugcwele indawo yokuhlala ehhotela, imizila kufinyeleleke phakathi kufinyeleleke izivakashi ezikhangayo, futhi emangalisayo kufinyeleleke nakho travel.
Yisiphi isitimela ongasithatha kuSave-A-Train uma uhamba nokukhubazeka?
Uma une ongakhetha eziningi ezitholakala kuwe (Kwamanye amazwe babe uhlelo lwezitimela kuphela eyodwa), zama ukukhetha yenethiwekhi enikeza amasevisi kakhulu ehambisana Wokujikeleza yakho nge izidingo ukukhubazeka. okungukuthi; Boarding usizo futhi kufinyeleleke olele izimoto. Zokugezela kufanele futhi ibe nkulu ngokwanele ukuze ajabulise wena futhi sabakhubazekile yakho kanye nothile lapho bevakashela iziguli noma isikhonzi. Njengenjwayelo, ukubuza imibuzo amaningi njengoba ungakwazi kusengaphambili ukugwema lezimanga ezingadingekile!
Izinsiza kanye Nemisebenzi
Wokujikeleza Special isevisi ukukhubazeka zingahluka kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye, kuya ngezinqubo ezimbalwa; izimoto ku isitimela yakho ethile, izakhiwo ngaleso ahlukahlukene iziteshi emzileni wakho, ngisho nenqubomgomo yakho yenkampani yenethiwekhi ekufinyeleleni.
Cologne Brussels Izitimela
Hlola ithikithi lakho nohambo lwakho ngokucophelela uma usulutholile. Qiniseka ukuthi wena ukhululekile nezinqubomgomo zayo kanye nezinhlinzeko ukuze kungukuthi ikumangaze zingathintwa yakho ehlukahlukene (ikakhulukazi uma uhamba kwezilwandle).
Ramps kanye Isisindo Imikhawulo
Ukuthola futhi off isitimela Kusobala kuyingxenye ebalulekile uhambo. qinisekisa iziteshi zakho ezokufika anemisila eliphezulu ezisekelweni noma sabakhubazekile ngamakheshi. Lokhu kuzokwenza kube lula kakhulu ukuthola noma ngaphandle kwe-isitimela sakho ngenkathi ihamba onokukhubazeka.
EMilan Pompei Izitimela
Florence ukuze Pompei Izitimela
Iningi abathwali abazokwenza konke okusemandleni abo ukuze ikwazi ukuhlalisa abantu ukuhamba ukukhubazeka kanye nokungaba umthwalo owengeziwe bangase zidinga (isb. sabakhubazekile, umoya-mpilo amathangi, njll). Uma wazi uya kudingeka izidingo wemithwalo ezengeziwe, ake nomgodla wakho wazi kusengaphambili.
Hlala izingxenye kufinyeleleke kakhulu edolobheni. Lokhu kungenye yezingxenye ezinzima kakhulu zokuhlela uhambo lwakho lwesitimela ngenkathi uhamba nokukhubazeka. Kungenzeka ukuthi uke wathola ehhotela elikhulu kufinyeleleke, kodwa lokho ozoyithola lapho uhamba / unikezele ngezinsizakalo isicabha? Zikhona amagquma kanye izitebhisi kuzo zonke izinhlangothi? Ingabe kufanele phenduka cobblestones? Zikhona zokudlela kufinyeleleke eseduze? Kubalulekile ukucwaninga endaweni ihhotela. Ungasebenzisa Google Maps Street View ukuze uthole ulwazi oluyisisekelo, ke imeyli yehhotela imibuzo yakho.
Nge zonke admin ngendlela, ukhumbule ukuthatha isikhathi ukuze uphumule futhi ujabulele adventure. Thatha isikhashana ukuhlangabezana abagibeli bakho nabo, ngibuke ngefasitela, noma umane ulahleke okwesikhashana njengoba niya umzila eziningi kangaka abaye ngaphambi.
Ungakwazi oda izitimela zakho amathikithi phakathi izitimela Esheshayo eYurophu ku Londoloza-A-zemininingwane Cishe zonke lapho uya khona wacela ngenhla 3 amaminithi, ngesikhathi eshibhe ithikithi isitimela amazinga futhi ethathelwa izimali yokubhuka obnoxious!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho?, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-disability-europe%2F%0A%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#ukukhubazeka #sabakhubazekile Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi uhambo ngesitimela traveltips